Sidee Pinterest ulashaqeysaa Instagram? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sidee ayuu Pinterest ula shaqeeyaa Instagram?
Waxaa laga yaabaa 11, 2021 0 comments 372
Maanta iyada oo la adeegsanayo digitation-ka sida ugu wanaagsan, waxaa jira boqolaal fursado oo dadku helaan qaado meelaha internetka oo si buuxda ugu firfircoonow wajiga waxa ka dhici kara meeraha laftooda. Shaki kuma jiro tani inay tahay istiraatiijiyad aad u aftahan ah oo la raadinayo xilliyadan dambe si loo gaaro faa'iidooyin aan hore loo arag.
Inta lagu jiro cusbooneysiinta adduunka, waxaa suurtagal ah inay wax isu beddelaan inay qaataan koorso cusub oo go'an halkaas oo wax walba elektiroonig ahaan uga shaqeeyaan. Sidaa darteed, waa fikrad wanaagsan in la ogaado cunsurrada ku jiri kara xagga sare ee kacaanka diyaaradda dhijitaalka ah laguna gaaro natiijo ka sii wanaagsan oo ka wanaagsan.
Ha ahaato shirkad, ama qof dabiici ah, waxaa lagama maarmaan ah in la adeegsado xeelado gaar ah oo gacan ka geysan doona guuleysiga dhammaystiran si loo helo dakhli dhaqaale. Waxa kale oo suurtagal ah in yoolalka bilowga ah la ogeysiiyo oo soo jiita dareenka isticmaalayaasha iyo in la gaaro adeegsadayaasha dabiiciga ah.
Faa'iidooyinka ku haynta Pinterest lala xiriirinayo Instagram
In kasta oo laga yaabo in aan loo maleyn karin inay macquul tahay, Pinterest waa fikrad shaqeyneysa oo haddii lagu xiro si aftahannimo leh, ay macquul tahay inay ku sii adkeystaan xiriirka ka dhexeeya bartaan iyo Instagram si loo gaaro natiijooyin wanaagsan oo soo koobaya wicitaanka xayeysiinta dabiiciga ah.
Noocyada noocan ah ee codsiyada waxay abuuri karaan faa'iido muddada gaaban, dhexe iyo muddada fog iyada oo aan loo baahnayn in macaamiisha lumiyo inta isku dayga la sameynayo. Kawaran haddii aadan seegi karin waa fursadaha laga heli karo gudaha bogga.
Labada waxyaaloodba waa lagu faafin karaa
Mid ka mid ah waxyaabaha wanaagsan ee dadka isticmaala ay ku baraarugi karaan ayaa ah inay awoodaan inay ogaadaan waxa ku jira labada barnaamij. Si kastaba ha noqotee, waxa muhiimka ahi waa taas had iyo jeer isku xirnaanta fikradda ugu weyn.
Joogtee is dhexgal buuxa
Isticmaalayaashu waxay rabaan inay helaan jawaabaha shakiyiintooda mid ka mid ah talaabooyinka ugu waaweynna shaki la’aan fikradaha aad ugu soo jeedin doonto iyaga meelaha ay ka kooban yihiin. Sidaa darteed, haddii aysan ka warqabin hal shay, waxay aadi karaan mid kale waqti cayiman.
U diyaar garowga halista kasta
In kasta oo xaqiiqda ay isku xiran yihiin, labada madal waxay codsanayaan lambarrada dakhliga si ay uga qaybqaadan karaan waxqabadyada uu soo bandhigay mid kasta. Dareenkan, xisaabaadka waa la xidhi karaa oo beddel furayaasha si aad uhesho faa iidada aan lahayn milyaneer khasaara iyo dadaal.
Sidee loola xiriiriyaa Pinterest barta Instagram?
Si kastaba ha noqotee, waxaa muhiim ah in la aqoonsado in isbahaysiga ka dhexeeya labada barxadood ay fursad gaar ah u tahay aqoonsan wax kasta oo adduunka maanta ka jira. Si kastaba ha noqotee, sidoo kale waa fikrad wanaagsan in la barto tallaabo-tallaabo ku saabsan sida ay isugu xirmi karaan.
Ku xir ikhtiyaarka: "Pinterest shirkadaha" astaamaha
Kadib soo gal labadaba kuna dar isticmaale shaqsiyeed
La wadaag qoraal ama biin midba midka kale
Sidan oo kale, waxaad ku sameyn kartaa isku xirka bogagga waqtiga rikoorka si aad u hesho boqolaal fursadaha aagga fikradaha la wadaago. Tani waxay sii qaadeysaa tikniyoolajiyadda maanta.
1 Faa'iidooyinka ku haynta Pinterest lala xiriirinayo Instagram
1.1 Labada waxyaaloodba waa lagu faafin karaa
1.2 Joogtee is dhexgal buuxa
1.3 U diyaar garowga halista kasta
2 Sidee loola xiriiriyaa Pinterest barta Instagram?
Sidee loo hubiyaa fadhiyada koontadaada Twitter?
Sidee loo dhaqaajiyaa xulashada qoraalka ee YouTube-ka?